Hevitra MPANOHARIANA | 156
Fanatsarana ny tanàna
2007-04-17 @ 07:16 in Andavanandro
Karazany aty indray moa no mitohy ny fitantarako tany amin’ny andavanandron’Iarivo tany. Efa kendreko ho iray ihany moa raha azo atao ny blaogy atorako na dia be dia be aza ny zavatra tiana ampitaina. Efa nolazaiko tany moa fa be ny ezaka ataon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra amin’izao fotoana izao. Ankehitriny dia efa vita tsara ihany koa ny fanavaozana ny zaridaina nasolo ny Lapan’ny tanàna may eo Analakely.
Nohavaozina tokoa satria tsaratsara kokoa noho ny zaridaina voalohany ny endriny ao no sady fenofeno kokoa. Milahatra tsara ny voanio ambolena amin’ny andaniny sy ny ankilany. Fenofeno kokoa ny zaridaina no tena maitso aok’izany ny ahitra. Azo lazaina fa tena reharehan’ny tanàna tokoa ny mahita azy. Na izany aza dia nasiana fefy zavaboary ihany koa io zaridaina io. Raozy no natao fefy. Mbola tsy misy vonikazo moa ilay raozy ka tsy fantatro izay lokony fa ny tsilo miranirany aloha no efa hita. Miaiky aho fa tena karazana artista na mpanolokolo zaridaina mihitsy no nahavita io zaridaina io. Fa ilay fakantsary moa dia tsy ananako mihitsy sady tsy misy mampihena ny vesany koa na mahazo aza noho ny tsy fananana logiciel e !
Rehefa vita io zaridaina nasolo ny Lapan’ny tanàna io dia ny zaridaina eo Analakely indray izao no hasiam-panamboarana. Izany hoe ho an’izay mahalala ny tsangambaton-dRalaimongo dia manomboka eo ka hatreny amin’ny Carole fleuris na Librairie Saint-Paul no dingana hatsaraina eo afovoan-tanàna. Efa voafefy hazo mihitsy moa ireo zaridaina roa ireo. Mino sy manantena aho fa ho tsara sy hifanahaka amin’ny zaridaina hatao amin’ny ilany atsinanana amin’ny zaridaina mamakivaky an’Analakely iny. Na izany aza dia tsy ny afovoantanàna ihany tsy akory no karakaraina toy izany fa na dia ny sisiny ihany koa aza tsy adino velively. Amin’iny lalana anoloan’ny Cenam iny na ny andaniny na ny ankilany dia ho gaga hahita ny zava-maitso amin’iny faritra iny. Vita ny zaridaina na dia mbola endriky ny ahitra ihany aza no mandravaka azy (tahatahaka ny zaridaina voalohany teo amin’ny lapan’ny tanàna ihany). Ny hazo ihany ka moa milahatra tsara fa misy voanio ihany koa eny an ! sady tena zavaboary fa tsy nataon-tanàna toy ny taloha intsony. Ho an’izay mandeha mijerijery tanàna moa no tena mahatsikaritra izany fa izay variana amin’ny fahasahiranana moa ho jamba tsy hahita izany e ! Amboarina tahaka izany ihany koa moa ny sisin-dalana amin’iny Amboniloha miakatra ho any Ivandry iny. Mbola eo ampanombohana moa ny Kaominina ka aleo aloha ho hita tsara ny vokatra.
Calumet lasan’ny Magro
Farany dia tsy mifandraika amin’izany fa tsikaritra kosa dia lasan’ny Magro izany ilay tany nanorenana ny toeram-pandihizana Le Calumet eo Antanimena. Efa vita ny trano mbola tsy reko ny amin’ny fitokanana ny trano. Raharaha be teto amin’ny tanàna moa ity Le Calumet ity ho an’izay nanara-baovao tany alohabe tany. Ny nanamelohana ny tompony dia tahaka izao: Ny vola malagasy ratsy efa tokony potehina no naodiny ka nanaovany zavatra hafa ka anisan’izany ny fananganana ny Le Calumet. Mino indray aho amin’izao fotoana izao fa tsy maintsy ho avy ny fanadihadian’ny mpanara-baovao te-hahalala ny fomba nahazoan’ny Tiko group ity toerana ity. Na izaho koa aza moa te-hahafantatra toraka izany koa.
NIsy nikasa hamono hoe?
2007-04-14 @ 11:08 in Politika
Ambaran’ny gazety rehetra izany teny nambaran’ny Praiminisitra Charles Rabemananjara sady minisitry ny atitany izany tamin’ny fanambarana navoakany ho an’ny mpanao gazety omaly. Izany fikasan-dratsy izany dia saiky notontosaina ny alin’ny 3 hifoha 4 avrily lasa teo izany hoe ny alina mialoha indrindra ny fitsapa-kevi-bahoaka ary tany amin’ny trano fonenana mihitsy. Somary nahavaka ny maro ihany ilay filazana : folo andro taty aoriana manko vao nolazaina izany toe-javatra izany. Nifanindry ihany koa tamin’ny fotoana nivoriana sy nanaovan’ny mpanohitra fanambarana ihany koa ilay fotoana. Ary andron’ny Zoma faha-13 no nanaovana azy izay ananan’ny sasany finoanoam-poana na tahotra manokana moa.
Resaka politika moa izy ity ka tsy maintsy mizara ny hevitry ny mpanara-baovao. Be ireo mitaky ny amoahana ny sarin’ireo nosamborina na tratra tamin’izany heloka izany na dia tampenana aza ny masony ho karazana porofo fa tsy ho zavatra foromporonina fotsiny ao anatin’izao toe-draharaha izao. Fa ny mahavariana dia niakatra tampoka teo ny adi-hevitra hanohanana na hanoherana ny filoha Ravalomanana. Ny fanakianana sy ny fiarovana moa no tiako lazaina amin’izany adi-hevitra izany. Zavatra tsotra ihany no ambarako etoana ary karazana vaovao ihany koa moa.
Tsy fantatro izay nambara any anaty gazety any ary tsy nahavaky teny ny momba io raharaha io loatra aho aloha Tamin’ny Asabotsy 7 avrily atoandro lasa teo dia nidina tamin’iny Tranoprinty Imarivolanitra (Fjkm) iny aho no nahatsikaritra ery ampita atsinanana ery Faravohitra misy ny tranofotsy ipetrahan’ny filoha Ravalomanana indrindra trano lavalava vao atsangana. Tena mifanila amin’ny tranon’ny fianakavian’ny filoha mihitsy io trano vao amboarina io. Lavalava ilay trano fa tsy hoe avoavo tsy akory.
Talanjona aho vantany vao nahita io trano vao aorina io. Vao novidian’ny filoha kosa angaha ny tany hanorenana ny tranon’ny mpiambina azy, hoy aho nanontany tena anankampo. Nefa dia ho sarotra dia sarotra ny fiarovana amin’izay fotoana izay. Ho maromaro ny olona hanao ny trano, izay mifanakaiky loatra amin’ny tranon’ny filoha satria tena mifanolo vodirindrina araka ny fiteny. Hiasa mafy sy ho henjana kokoa izany ireo mpiambina azy mandra-pahavita ny trano. Tsy maintsy arahi-maso hatrany ny fasika sy ny fitaovana hafa ampidirina ao anatin’ny faritra fandrao misy zavatra mampiahiahy. Na izany na tsy izany tena mampidi-doza be amin’ny fiarovana ny filoha io fanorenan-trano io. Kanjo moa dia misy ity filazana hikasa hiditra amboletra sy hitifitra ity. Mety ho tsy mifampiditra ny resaka saingy hitako fa tena ho marefo mihitsy iny faritra iny mandra-pahavitan’ny trano, araka ny eritreritro izay tsy havanana loatra amin’ny resaka fiarovana.
«Mialoha 1 2 3 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 Manaraka»